Rui Faria Oo Xayiraad 6 Kulan Ah Garoomada Laga Saaray
HomeEnglandRui Faria Oo Xayiraad 6 Kulan Ah Garoomada Laga Saaray
Tababare ku xigeen Rui Faria oo la huwiyey ganaax lix kulan oo aanu garoomada fooda soo gallinayn ah iyo inuu bixiyo lacag dhan £30,000, kadib markii lagu helay inuu aflagaadeeyey garsoorkii ciyaarta Chelsea guuldarada kala kulantay Sunderland.
Caawiyahan reer Portuqal ayuu garba duub u qabtay tababare Jose Mourinho, isagoo doonayay inuu gacanta ula tago Garsoore Mike Dean iyo calwadaha Afraad ee Phil Dowd kadib markii uu ka xanaaqay rigoodhe kooxdiisa lagu qabtay.
Xidhiidhka kubada cagta ee wadanka Ingiriiska ayaa qoraal ay soo saareen ku faahfaahiyey ganaaxa Faria, waxaanu u dhignaa sidan : ‘ ‘Sida ku cad dhagaysigii dacwad ay si madax banaan u baadheen gudida shuruucdu oo maanta dhagaystay, Rui Faria oo Chelsea ka tirsan waxaa lagu xukumay 6 ciyaarood oo xayiraad laga saaray garoomada, oo racfaan laga qaadan karo, kadib markay ku cadaatay inuu si ula kac ah u jebiyey laba qodob oo xeerka FA ah.
‘Qodobka hore ee uu ku tuntay ayaa ah in Faria uu erayo ama weedho cay ah u adeegsaday garooskii afraad ciyaartii Chelsea la ciyaaraysay Sunderland , 19 April 2014.
‘Qodobka labaadna waxa weeye, sidii uu u dhaqmay markii garsoorku ka codsadeen inuu ka baxo aaga garoonka ee kooxda Farsamada loogu tallo gallay oo uu si dhaqan xumo badan muujiyey.
‘Faria, oo codsaday inaanu cidna u soo diran dhagaysiga dacwada, waxa kale oo lagu xukumay lacag ganaax ah oo dhan £30,000 waxaana looga digayaa inuu dib falal noocan oo kale ah ugu kaco.’
“Gerrard mar ay noqotoba wuu ku soo noqon doonaa Anfield si uu u tababaro Liverpool”- G.Houllier
Dareen Kii Taageerayaasha Man City ee Warka Eriga Tababare Moyes